အသေးစားအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း။ - YiZheng အကြီးစားစက်ယန္တရားကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဓာတ်မြေသြဇာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသို့မဟုတ်လယ်သမားများအတွက်၊ သင်သည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်နည်းနည်းသာရှိပြီးဖောက်သည်အရင်းအမြစ်မရှိလျှင်၊ သင်သည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းငယ်မှစတင်နိုင်သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းနိုင်ငံတော်သည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန် ဦး စားပေးမူဝါဒများချမှတ်ခဲ့သည်။ အော်ဂဲနစ်အစားအစာဝယ်လိုအားများလေလေ၊ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေရုံသာမကသီးနှံအရည်အသွေးနှင့်စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုတိုးတက်စေရုံသာမကစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအချက်အချာကျသောအရင်းအမြစ်များမညစ်ညမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့အတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု။ ယခုအချိန်တွင်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမူဝါဒများလိုအပ်ရုံသာမကအနာဂတ်တွင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အမြတ်အစွန်းသစ်များရှာဖွေရန်၊
အသေးစားအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၏ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းသည်တစ်နာရီလျှင်ကီလိုဂရမ် ၅၀၀ မှ ၁ တန်အထိရှိသည်။
၃။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာမှထုတ်လုပ်သောကုန်ကြမ်းများသည်စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အညစ်အကြေးနှင့်မြို့ပြအိမ်တွင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်ပြီးကုန်ကြမ်းများသည်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၄။ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ချေးခြင်း၊ ၀ တ်ဆင်မှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ သက်တမ်းကြာရှည်ခြင်း၊
၅။ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်၊
1. ကို double- ဝင်ရိုးရောနှော
နှစ် ၀ င်ရိုးတန်းရောနှောစက်တွင်ခြောက်သွေ့သောပြာများကဲ့သို့သောအမှုန့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုပြီးခြောက်သွေ့သောပြာမှုန့်ပစ္စည်းများကိုအညီအမျှစိုစွတ်စေရန်ရေဖြင့်နှိုးသည်။ စိုစွတ်သောပစ္စည်းသည်ခြောက်သွေ့သောပြာများမထနိုင်သဖြင့်ရေသွယ်ခြင်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် စိုစွတ်သောပြာတင်သို့မဟုတ်အခြားသယ်ဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာများမှလွှဲပြောင်း။
အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအသစ်ကိုကြက်၊ မစင်၊ ဝက်ချေး၊ နွားမ၊ ကာဗွန်နက်၊ ရွှံ့၊ ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန်များ၏ပါဝင်မှုသည် ၁၀၀% အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ အမှုန်အရွယ်အစားနှင့်တူညီမှုကိုထပ်ဆင့်လွှင့်မှုနှုန်းအရချိန်ညှိနိုင်သည်။
အရွယ်အစား LW - အမြင့် (mm)
roller dryer သည်ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန်များကိုခြောက်သွေ့စေရန်အသုံးပြုသည်။ အတွင်းပိုင်းဓာတ်လှေကားပြားသည်ပုံသဏ္particlesာန်အမှုန်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်မြှင့ ်၍ ပစ်လိုက်သည်၊ သို့မှသာပစ္စည်းသည်ယူနီဖောင်းခြောက်သွေ့စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပူသောလေနှင့်အပြည့်အဝထိတွေ့နိုင်သည်။
4. roller အေး
roller cooler သည်စက်ကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးခြောက်သွေ့ပြီးနောက်ပုံသွင်းထားသောဓာတ်မြေသြဇာအမှုန်များကိုအအေးပေးပြီးအပူပေးသည်။ ပုံသွင်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန်များ၏အပူချိန်ကိုလျှော့ချနေစဉ်ရေပါဝင်မှုကိုလည်းလျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန်များ၏စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်ရန်စက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
5. Literiform ချွတ် grinder
ပစ္စည်းအမှုန်အရွယ်အစား (mm) ကြိတ်ခွဲပြီးနောက်
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း （t / h）
အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာအမှုန်များကိုအိတ်လျှင် ၂ ကီလိုမှ ၅၀ ကီလိုဂရမ်ဖြင့်ထုပ်ရန်အော်တိုဓာတ်မြေသြဇာထုပ်ပိုးစက်များသုံးပါ။
လေအရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု （m3 / h）
ခြေလှမ်းအိတ် / မီတာထုပ်ပိုး